टोखामा दम्पतीको शंकास्पद मृत्यु : घटना थप रहस्यमय – Koshidaily
access_alarms Koshi daily २९ पुष २०७७, बुधबार ०१:३९	chat_bubble_outline 0	Comments
काठमाडौं : ‘पूर्वजन्ममा म उहाँको छोरा रहेछु, यो जन्ममा बाबु। मैले सायद के पूरा गर्न सकिनँ छाडेर जानुभयो।’ ६८ वर्षीय तारकबहादुर केसी बानेश्वर थापागाउँस्थित पञ्चकुमारी किरियाघरमा मंगलबार यसरी मन बहलाउँदै थिए। आँखा रसाइरहेकै थिए। तापनि, शुभेच्छुकसँग उनी भन्थे, ‘हिजोको भागभोग हो। उसले चाँडै सन्सार छाड्यो।’
तारकका छोराबुहारी उमेश र सुदीक्षा शुक्रबार राति टोखामा मृत फेला परेका थिए। तारक छोराबुहारीको किरियामा बसेका छन्। किरियापुत्री भवनमा कोठाबाहिर उमेशको फोटोमा माला चढाइएको थियो। नजिकै दियो बलिरहेको थियो। बुहारीको फोटो नभएकाले ल्याउने तयारी भएको उनले सुनाए।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका नाममा बुहारी (सुदीक्षा)ले उमेशको हत्या गरेर आफूले आत्महत्या गरेको बुझाइप्रति उनले असहमति जनाए। ‘यो काल्पनिक कुरा मात्रै भएन र ? मारेको र मरेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी कोही छ ?’, उनले भने, ‘अब प्रहरी अनुसन्धानले देखाउला सत्यतथ्य के रहेछ।’
सुदीक्षाका माइती अमेरिकामा बस्दै आएका छन्। उमेशका परिवारजनले सुदीक्षाकी दिदी शर्मिलालाई मात्रै चिन्छन्। तिनै शर्मिला प्रहरी र उमेशका परिवारको शंकाको घेरामा छिन्। प्रहरीले लामो सोधपुछपछि उनलाई छाडेको छ।
‘शुक्रबार बिहान साढे ६ बजे शर्मिला उमेशको कोठामा पुगेर घटना देखेपछि प्रहरीलाई किन खबर गरिनन् ?’, उमेशका दाजु हिमेशले भने, ‘हामीलाई त क्यानडाबाट सूचना आएको हो।’ १२ घण्टापछि मात्रै प्रहरीले घटनाबारे जानकारी पाउनु, शर्मिलाले प्रहरीमा तत्काल खबर नगर्नु, क्यानडासम्म घटना थाहा पाउनु, हिमेशका परिवारले उमेश र सुदीक्षाको शव अस्पताल पुगेपछि मात्रै थाहा पाउनुले घटना शंकास्पद रहेको बुझाइ प्रहरीको छ।
क्यानडाबाट शर्मिलाकै आफन्तले एक पूर्वसुरक्षा अधिकारीलाई फोन गरी जानकारी दिएपछि आफूहरूले थाहा पाएको हिमेशले बताए। उमेश र सुदीक्षाको शव पोस्टमार्टमका लागि टिचिङ (त्रिवि शिक्षण) अस्पताल पुर्‍याइसकेपछि आफूहरू त्यहाँ पुग्दा मुर्छित भएको उनले सुनाए।
‘धेरै कराएपछि भाइबुहारीको शव हेर्न दिए। भाइ घोप्टो अवस्थामा थियो। टाउकोको पछाडि भागमा गहिरो चोट थियो’, उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘भाइको शव गन्हाउने भइसकेको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि थाहा भयो, धारिलो हतियार प्रहारबाट भाइको मृत्यु भएको र बुहारीको झुन्डिएर।’
पोस्टमार्टम रिपोर्टअनुसार उमेशको मृत्यु २४ देखि ३६ घण्टा र सुदीक्षाको मृत्यु १२ देखि २४ घण्टाको बीचमा भएको देखिन्छ। ‘भाइलाई बुहारीले नै मारेको प्रमाण के छ र ? कि त प्रहरीले त्यो पुष्टि गर्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘होइन भने अर्को पक्ष को संलग्न छ ? त्यो पत्ता लगाइदिनुपर्‍यो।’ शुक्रबार शर्मिला र सुदीक्षाबीच फोनमा लामो संवाद भएको तथ्य प्रहरीले फेला पारेको छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा शव पोस्टमार्टम गर्दा सुदीक्षाको गर्भमा दुई महिनाको बच्चा रहेको पाइएपछि परिवारका सदस्य झन् मुर्छित भएका छन्। उमेश अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएको चार महिना भएको थियो। उनी फूलपातीका दिन नेपाल आएका थिए। जनवरी १४ मा अमेरिका उड्ने तयारी थियो।
टोखा घटना अनुसन्धानमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, अपराध महाशाखा, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु र महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका गरी चार टोली खटिएका छन्। प्रहरीले घटनास्थलबाट सुदीक्षा र उमेशका मोबाइल, सिलौटा, लोरोलगायत सामान बरामद गरेर प्राविधिक पक्षबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।
महानगरीय प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सुदीक्षाले उमेशको हत्या गरी आफूले आत्महत्या गरेको देखिए पनि अन्य पाटोबाट अनुसन्धान भइरहेको बताए। ‘हामीले विभिन्न प्राविधिक पाटोबाट अनुसन्धान गरिरहेका छौं। जे हो त्यो तथ्य बाहिर ल्याउँछौं’, एसएसपी अशोक सिंहले भने। गत शुक्रबार राति टोखास्थित ग्रान्ड भिल्लामा रहेको अपार्टमेन्टमा उमेश र सुदीक्षा मृत फेला परेका थिए। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा यो खबर छ ।